Caanuhu Miisaanka Jirka Miyay Kordhiyaan Mise Way Dhimaan?
Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Friday, 17 Nov 2017 04:27 AM / No Comments
Dadka qaar waxay u haystaan in caanuhu miisaanka dhimaan, halka kuwa kalena ay leeyihiin miisaanka ayay kordhiyaan Hadaba, xaqiiqada dhabta ah maxay tahay?
Caanaha lo’da ayaa waxay ka mid yihiin caanaha aasaasiga ah ee aan nidaam kasta oo cunno aan looga maarmin, Daraasad cusub oo lagu faafiyay jariidada Mareykanka ee Nutrition-ka isla markaana ay ka qeybgaleen in ka badan 18kun oo haween ah oo da’doodu u dhaxayso 45sano iyo ka badan, ayaa lagu ogaaday in isticaalka caanaha aanuu marnaba wax dhibaato ah lahayn, waxabay diidaan in miisaanka jirku kordho.
Cilmibaarayaashu waxay daraasaddan ka ogaadeen in dumarka caanaha dufanka buuxa leh si maalinle ah u istcmaala muddo 11 sano ah, miisaankooda aaney waxba ku kordhin, buurnina aan lagu arkin, halka taa bedelkeedu ay dhacday marka la istcmaalo caanaha dufanku ku yaryaha.
Waxaa xusid mudan, iney jirtay daraasad xilli sii horreysay la sameeyay oo tilmaamaysa in caanuhu ay kordhiyaan calcium-ka, vitamin D, waxaana suurtogaliyaan iney miisaanka dhimaan, daraasadaasi ku talisay in saddex koob oo caanaha maalintiii uu qofku cabo.